Global Voices teny Malagasy » Ejypta: Niharan’ny herisetra ilay bilaogera nogadraina ary nasaina hivadika Miozolomana ho takalon’ny famotsorana azy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Janoary 2019 3:51 GMT 1	 · Mpanoratra Noha Atef Nandika Raveloaritiana Mamisoa
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny septambra 2009)
Tsy mbola avela mitsidika ny olona arovany ny mpisolovavan'ilay bilaogera Hani Nazeer  nosamborina. Na izany aza dia nahavita nifandray tamin'ny Tambajotra Arabo momba ny zon'olombelona ity bilaogera kristianina Nazeer ity, nanambara fa niharan'ny herisetra sy nangatahana mba hivadika ho silamo izy ho takalon'ny famotsorana azy:
Nodarohan'ireo manamboninahitra ao amin'ny fonja izy sy ireo voafonja hafa ary noterena nosolaina ny lohan'izy ireo. Nilaza i Nazeer fa nosoratana toy ny gadra mpanao heloka bevava izy, izay mahatonga ny ainy ho atahorana satria hogadraina miaraka amin'ireo mpivarotra zava-mahadomelina sy mpamono olona izy … Nitaraina tany amin'ny mpisolovavan'ny ANHRI izy fa noterena hivadika silamo ho takalon'ny famotsorana azy.
Efa ho herintaona izay i Nazeer no nosamborina. Ny 1 Oktobra 2008, nalaina tao an-tranony tao Qena (Ejipta ambony) noho ny fanampian'ny fiangonana sy fandraisana lehibe nataon'ireo Miozolomana teo an-toerana izy.
Araka ny filazan'ny ANHRI , nanomboka ny adihevitra rehefa nisy tanora Miozolomana niditra tao amin'ny bilaogin'i Hani Karaz Elhob  (Tia Vatomamy) ary nahita rohy mankany amin'ny tranonkala iray hafa misy tantara antserasera antsoina hoe “Osin'i Azazil any Lameka” izay ahitana fanafihana ny finoana silamo. Ity tantara ity dia nosoratanà mpanoratra tsy mitonona anarana tamin'ny anarana “Mopera Utah” ary natao ho setrin'ilay tantara malaza “Azazil” nosoratan'i Yusuf Zidane, izay heverin'ny mpandala ny nentin-drazana sasany fa fanafintohinana ny kristianisma. Nihevitra ny tanànan'i Hani fa izy no mpanoratra ny tantara.
Amin'izao fotoana izao, dia tsy misy lahatsoratra ny bilaogin'i Hani; toa nesorina daholo ireo lahatsorany rehetra. Mpitsikera ny Miozolomana sy ny kristiana hiringiriny ary ny fampifangaroana ny fivavahana amin'ny politika ity bilaogera nosamborina ity.
Nogadraina tao amin'ny fonjan'i Borg El-Arab tao Alexandria i Nazeer, toerana izay nanagadrana ireo bilaogera toa an-dry Musa'ad Abu Fagr , izay nodarohana tao amin'ny efitry ny fonjany sy i Kareem Amer  izay niharan'ny fampijaliana mafy niteraka ratra maromaro ankoatra ny nify tapaka. Nesorina tamin'i Kareem Amer ny zo hitatitra ny tranga sy ny zo handrakitra ireo ratra ireo amin'ny tatitra ara-pitsaboana. Bilaogera roa hafa no voalaza fa nampijaliana tao Borg El-Arab tahaka an'i Kareem El-Beheiry  sy Mohammad Maree .
Mba hampitahorana azy ireo, sy ny tontolon'ny bilaogy Ejipsiana ambiny, matetika gadraina miaraka amin'ireo mpanao heloka bevava, na atokana efitra ireo bilaogera. Na izany aza, tsy nahatonga tahotra tamin'ny tontolon'ny bilaogy Ejipsiana izay lasa navitrika tanteraka tamin'ny fanoherana ny fanararaotana any am-ponja sy ny fanagadrana mangingina ity paikady ity.
Niseho ireo heloka bevava atao amin'ny bilaogera ireo tao anatin'ny tranga mateti-pitranga, dia ny fampijaliana manerana ny biraon'ny polisy sy ny fonja Ejipsiana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/25/133956/
 bilaogera Hani Nazeer: http://haninazeeraziz.blogspot.com/
 Musa'ad Abu Fagr: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2009/04/22/egypt-a-new-detention-order-for-a-blogger-arrested-since-2007/
 Kareem Amer: http://www.anhri.net/en/reports/2007/pr1112.shtml
 Kareem El-Beheiry: http://www.rsf.org/Blogger-Kareem-el-Beheiri-freed.html
 Mohammad Maree: http://allthegoodnameshadgone.blogspot.com/2008/07/mohamed-marees-account-of-his.html